स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ : मतदान केन्द्रमा बिहानैदेखि मतदाताको घुइँचो, कुन प्रदेशमा कति मतदाता ? – Upahar Khabar
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ : मतदान केन्द्रमा बिहानैदेखि मतदाताको घुइँचो, कुन प्रदेशमा कति मतदाता ?
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७९, शुक्रबार ०७:३८ May 13, 2022
काठमाण्डाै – देशभरका पालिकामा जनप्रतिनिधि छान्नको लागि मतदान सुरु भएको छ । अहिले बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान बेलुका ५ बजेसम्म चल्नेछ । सबै मतदान केन्द्रमा बिहानैदेखि मतदाताको घुइँचो लागेको छ ।
आज बेलुका ५ बजेसम्म अत्यावश्यक र पास भएका बोहक गाडी चलाउन गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ । चुनावको बेला आचारसंहिता उल्लङ्घन र अरु अप्रिय घटनाहरु नहुन् भनेर आज बिहान ६ बजेदेखि बेलुका मतदानको समय नसकिउञ्जेल दुई पाङ्ग्रे लगायत सबै गाडीहरु चलाउन रोक लगाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्कोको नाममा मतदान गरेको पाइए तत्काल २५ हजार जरिबाना हुने